Gudi isku dhaf ah oo loo saaray xalinta dagaaladii Kismaayo. | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Thursday, June 20th, 2013	Home
Gudi isku dhaf ah oo loo saaray xalinta dagaaladii Kismaayo.
Published on February 27, 2013 by muqdisho abdifatah · No Comments
Number of View :1197Wararka laga helayo magaala xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ee koofurta Soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijinayaan in ladhisay gudi isku dhaf ah oo wax ka qabta dagaalkii maalma kahor ka dhacy bartamaha magaaladaasi ee sababay qasaaraha nafeed iyo tan maaliyadeed.
Gudigaasi ayaa waxaa lasheegay in uu isugu jiro saraakiil kasocota kooxda Raaskanbooniyiinta ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe iyo saraakiil kale oo iayna metelaya Meleteriga Soomaaliya ee kusugan gobalada Jubooyinka iyo Gedo.
Gudigaas nabadeed ayaa waxaa loo xil saaray in ay biya ku shubaan debka laga cabsi qabo in uu mar kale holco ee u dhexeyn kara dhinacyadii isku farasaaray Kismaayo ee Raaskanbooniyiinta iyo qaar kamid ah ciidamda dowlada Soomaaliya oo ka gadooday dhaqanka kooxda Raaskanbooni oo qancin waayay.
Sida lagu helayo wararka hor dhaca ah gudigu waxa ay siyaabo gaar gaar ah ula kulmi doonaan dhinacyadii hardamay, iyaga oo kadibna marka ay isku soo dhaweeyaan labadha dhinac oo ay soo ogadan halka sartu ka qursnatahay xalka abaari doona.
Magaalada Kismaayo oo kamid aheyd magaalooyinka ugu fowdad badnaa dalka Soomaaliya sanadihii kala daneyn la’aanta ayaa waxa ay marti gelisay isbuucaan bilaawgiisii dagaal saacado qaatay oo dhex maray Jabhadda Raaskanbooni iyo qaar kamid ah ciidamada dowlada Soomaaliya ee halkaasi jooga iyada oo ay ka dhasheen qasaare igu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed.
Arimaha bulshada/Galmada	Dhagayso shacabka Boosaaso qarkood oo Biyo La”aan ka Cabanaya